Ciyaartoyga Ay Ku Dagaalamayaan Barcelona, PSG Iyo Chelsea Ee Miralem Pjanic Oo Warbaahinta La Hadlay. - Gool24.Net
Ciyaartoyga Ay Ku Dagaalamayaan Barcelona, PSG Iyo Chelsea Ee Miralem Pjanic Oo Warbaahinta La Hadlay.
Xidiga khadka dhexe ee kooxda Juventus ee Miralem Pjanic ayaa markii ugu horaysay ka soo muuqday warbaahinta tan iyo markii uu soo baxay in uu heshiis la gaadhay Barcelona isla markaana lala xidhiidhinayo kooxaha Chelsea iyo PSG.
Miralem Pjanic ayaa bartilmaameed xoogan u noqday kooxaha Barcelona, Chelsea iyo PSG waxaana jira saddex ciyaartoy oo kooxahan ka tirsan oo ay Juventus midkood ku badalan doonto waxayna kala yihiin Arthur Melo oo Barca ay ka doonayso, Jorinho oo ay Chelsea ka rabto iyo waliba PSG oo ay isku badalan karaan Pjanic iyo Leandro Paredes.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in tababare Maurizio Sarri aanu ku xisaabtamayn adeega Miralem Pjanic waxaana loo badinayaa in kooxaha Barcelona, Chelsea ama PSG uu xili ciyaareedka soo socda ku qaadan doono.
Laakiin Miralem Pjanic ayaa shaaciyay qaabka uu wali ugu qanacsan yahay kooxdiisa Juventus inkasta oo uu ka war qabo in kooxo waa wayn oo Yurub ah lala xidhiidhinayo.
Miralem Pjanic oo kooxdiisa Juventus ka hadlaya ayaa yidhi: “Juventus waa qoys, waa koox joogta heerka ugu saraysa”.
Intaas kadib Miralem Pjanic ayaa u muuqday in uu hoos u dhigayo wararka mustaqbalkiisa shakiga galinaya wuxuuna yidhi: “Marka aad eegto koobabka ay iyagu ku soo guulaysteen, waxaad naftaada u sheegaysaa in aad iyaga wax ku soo kordhiso, taasi waa koox aan caadi ahayn”.
Dhinaca kale Miralem Pjanic ayaa la waydiiyay shaqsigii ka badalay doorkii caawiyaha weerarka ee uu ka ciyaari jiray markii uu da’da yaraa wuxuuna yidhi: “Ka hor intii aanan iman Juve, waxa uu Allegri aniga ii sheegay in uu iiga baahnaa difaaca hortiisa. Si tartiib ah ayaan ula qabsaday, waxa uu ii sheegay waxay waajibka igu ahayd in aan horumar ku sameeyo”.
Laakiin booska burburiyaha ama khadka dhexe uu Allegri soo baray Miralem Pjanic ayaan wali ka joojin in uu ka qayb qaato dhismaha weerarka wuxuuna yidhi: “Si kastaba ha ahaatee, taasi aniga igamay joojin in aan dib ugu soo laabto dhexda hore”.
Miralem Pjanic ayaa la filayaa in marka uu kooxdiisa Juventus la dhamaysto kulamada baaqiga ka ah Serie A in uu u dhaqaaqi doono kooxda Barcelona oo hadda la sheegay in ay heshiis la sii gaadhay balse PSG iyo Chelsea ayaan wali dagaalka ku hadhin.